Yonke imikhiqizo yomkhiqizo we-Newton yathandwa phakathi kwamaqembu omhlaba ku-triathlon. Kuyathakazelisa ukuthi kuphela ngo-2015 phakathi kwalabo abaphumelele okokuqala ku-Ironman Hawaii, abangaba ngu-30% wabathintekayo bebezongena kulo mshini.
Umlando wokwakha amasinki "wokugijima kwemvelo" eNewton
Konke kwaqala ngawo-1990, lapho "i-caster stop", njengoDanny Ebshire ebizwa ngokuthi, yavula isitolo esithengisa ama-orthopedic insoles e-US. Wayazi yonke into mayelana nesakhiwo sobuso bomuntu kanye ne-biomechanics: ngaphezu kweminyaka eyi-10 walungisa ubukhulu bezinkinobho ze-ski. Ngaphezu kwalokho, lo mfana wayethanda ukubamba iqhaza kuma-marathons, ngakho-ke, ngenxa yokuthi wayenolwazi oluningi ngemuva kwakhe, angase abe nesibonakaliso esincane kakhulu esinqumayo uhlobo lokulimala kwezinyawo .
Ukukhuluma okuningi nabagijimi, ikakhulukazi, abagijimi, uDanny waqaphela ukuthi izicathulo zezemidlalo ezikhona zingalimaza impilo yomuntu. Kwavela kulo mzuzu lapho eqala ukudala izicathulo ezigijima ezikhuthaza izindlela zokusebenza zemvelo.
Izici zezicathulo ezigijima
Le nkampani ayikwenzi nje ukukhiqiza izicathulo zezemidlalo, kodwa futhi ifundisa abantu izimiso eziyisisekelo zokusebenza kahle, ngenxa yokuthi kungenzeka ukuthi asebenze ngokuphumelelayo kuphela, kodwa futhi ngaphandle kokulimala.
Isici esiyinhloko sezicathulo ezigijima yilona uhlelo oluthile olwenziwe ngokukhathala kwe-front of the foot, okuthiwa Action / Reaction. Ifana ne-pistons: ngesikhathi umgijimi eyeka ukugijima, eyeka, aqede ukushaqeka futhi afike ekamelweni elikhethekile elisendaweni ephakathi. Uma umzuzwana wokudumala kwenzeka, i-pistons ikhulula amandla.
Uma ungeke ukwazi ukuya emfundweni ye "ukugijima kwemvelo", okuyinto uDanny Ebshir ephethe njalo ngoMgqibelo eBoulder, eColorado, bese ufunda okuyisisekelo imiyalelo ekhonjiswe kulesibili pair of izicathulo egijima.
Sibutsetelo sneakers Newton Running
Isisindo esilula, izinga elihle kakhulu kanye nesimo sokuqala - lezi yizici ezintathu eziyinhloko zesimo ngasinye salolu hlobo. Ayikho isisindo esikhulu esithende, okusho ukuthi akukho isithende. Ngendlela, ukuqina kwesithende kungu-1 cm kuphela.
Uma ufuna ukuthenga imodeli ngensizakalo engaphansi kwezinyawo nokuphendula okungcono, abakhiqizi bancoma ukuthi bahlolisise umzila we-Lightweight Trainer.
Uchungechunge lomqeqeshi laklanyelwe kulabo abagijimi abathi, ngesikhathi sokugijima, ukushaya okukhulu kuwela esithendeni. Amathengi alo modeli atusa labo abafisa ukufunda inqubo "yokusebenza kwemvelo".
Ukugqoka-bustier - ngubani ofanelekayo, ukuthi yini ongayigqoka nendlela yokwakha izithombe ezifingqiwe?
IJean eqondile - izithombe ezingu-50 zezithombe ezimfashini zonke izintandokazi
Amajaji abesifazane abathandekayo - izitayela ezintsha zonyaka ezishayela imfashini
Ijethi yezemidlalo enebhodi
Ngenza kanjani iKhabhinethi ye-TV ngezandla zami?
Isaladi ngekhukhu elibhemayo kanye nekhukhamba entsha
Ubuhle baseSweden, obunamamitha angu-108 ngo-188 cm, bunqoba i-intanethi
Ukudla kuma porridges - izinsuku ezingu-7
I-Orieng yamakati - ukubuka okuningiliziwe kwebanga
Ukuhlukahluka ebuhlotsheni bomndeni
Indlela yokugoba isikhwama sokuhlala?
UJennifer Lawrence wahlangana noDarren Aronofsky?
Amakhukhi we-Gingerbread - iresiphi
I-manicure eluhlaza - imibono engcono nemifashini yefashini
Faka i-belyash - zokupheka okumnandi we-baking yendabuko yaseTatar
I-embassy yaseSwitzerland eRussia
U-Selena Gomez no-Niall Horan